Saalax Oo Diiday In Liverpool Daawayso – Heemaal News Network
Saalax Oo Diiday In Liverpool Daawayso
Mohamed Salah ayaa xulka qarankiisa Masar u ciyaaray 90 daqiiqadood isaga oo dhaawac ah, kaddib markii uu iska diiday Liverpool oo ka dalbatay in la daaweeyo, isla markaana sawirro laga qaado lugtiisa si aanu khatar weyn u gelin.
Xulka qaranka Masar ayaa guul cidhiidhi ah oo 1-0 ah ka gaadhay Ghana kulamada isreeb-reebka tartanka qaramada Afrika, waxaana Mohamed Salah oo ahaa kabtanka waddankiisu uu dhamaystay kulankaas.
Goolka guusha siiyey Masar ayaa waxa daqiiqaddii 87aad dhaliyey Mostafa Mohamed, waxaanay iskaga maydheen niyad-jabkii isreeb-reebka Koobka Adduunka ee ay guul-darrada u xambaarisay Senegal iyo finalkii Koobka Qaramada Afrika ee rikoodheyaasha ay Senegal koobka kaga qaadday.
Tababaraha xulka qaranka Masar, Ehab Galal oo ciyaarta kaddib warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in Mohamed Salah uu dhaawac ahaa kulankan, haddana uu ciyaaray, waxaana uu sidoo kale daboolka ka qaaday in laacibkani uu iska diiday Liverpool oo doonaysay in la daaweeyo.
“Salah waa uu dhaawacnaa, haddana wuu ciyaaray.” Ayuu yidhi Ehab Galal, waxaanu sii raaciyey: “Wuxuu iska diiday codsi uga yimid Liverpool oo ahaa in la sawiro ka hor ciyaarta, balse hadda ayaa uu sawirka tegi doonaa.”
29 jirkan oo xilli-ciyaareedkii tegay 23 gool ka dhaliyey horyaalka Premier League, abaal-marinta kabta dahabka ahna ay wadaageen Heung-min Son, ayaa waxa uu xalay muujiyey in ay ka go’an tahay in uu waddankiisa ka caawiyo sidii ay u guuleysan lahaayeen, isaga oo iska indho-tiray khatarta uu geli karayo maadaama uu dhaawac ku ciyaarayay.
Masar ayaa waxay hadda sugaysaa natiijada baadhitaanka lagu samaynayo Salah iyo waxa kasoo baxa sawirrada laga qaado ka hor labada ciyaarood ee muhiimka ah ee Ethiopia iyo South Korea ee tobanka maalmood ee foodda inagu soo haya gudahooda ay la ciyaari doonaan.
Dhirbaaxo Siyaasadeed Oo Dalalka Muslmiku Ku Dhufteen Hindiya
Meydka Wiil Soomaali Mareykan ah Oo Laga Dhax Helay Wabiga Mississippi
Cayartoyda Manunited Oo Ka Guuxay Magacaabista Ralf Rangnick
Heemaal November 27, 2021
Dal Afrikaan Ah Oo Shaqo U Soo Bandhigay Tababare Jose Mourinho
Heemaal December 25, 2021